မကြာသေးမီက စျေးကွက်ကျဆင်းနေသော်လည်း NFT အရောင်းနှင့် blockchain ဂိမ်းများသည် ဆက်လက်ကြီးထွားနေသည်- အစီရင်ခံစာ - Token Myanmar
မကြာသေးမီက စျေးကွက်ကျဆင်းနေသော်လည်း NFT အရောင်းနှင့် blockchain ဂိမ်းများသည် ဆက်လက်ကြီးထွားနေသည်- အစီရင်ခံစာ
2022 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလသည် လက်ရှိစျေးကွက်များမြင်နေရသည့်အတိုင်း crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ကြမ်းတမ်းနေပါသည်။ Bitcoin ၏စျေးနှုန်းအတက်အကျများရှုပ်ထွေး နှင့် အခြားသော cryptocurrencies အချို့က ကျဆင်းမှုသည် မကြာသေးမီကဟု ယူဆကြသည်။ နှုန်းထားသစ်များ မြှင့်တင်ရန် ဖက်ဒရယ် ရည်ရွယ်ချက်များ, ပြီးနောက် ကာဇက်စတန်မှာ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေ၊ Bitcoin ၏ hash နှုန်းကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။ ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် အဘိုး၊ Bitcoin သည် $42,000 အောက်ကျဆင်းသွားသည်။ ကုန်သည်များသည် bullish အချက်ပြမှုများကို ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် NFT ကုန်သွယ်မှုနှင့် blockchain ဂိမ်းများသည်ကျဆင်းမှုကိုခုခံပုံရသည်။ အရ အစီရင်ခံစာများ DappRadar မှ၊ NFT အရောင်းအ၀ယ်များသည် ကျဆင်းနေသည့် crypto စျေးနှုန်းများကြားတွင် ဆက်လက်တိုးလာခဲ့သည်။ "Ethereum NFT dapps နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော UAW အရေအတွက်သည် Q3 2021 ကတည်းက 43% တိုးလာသည်" ဟု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ NFT ကုန်သွယ်မှုမှရရှိသောငွေသည် 2021 Q3 တွင် $10.7 billion မှ $11.9 billion သို့ 2022 ခုနှစ် ပထမဆယ်ရက်အတွင်း $11.9 billion သို့ရောက်ရှိသွားကြောင်း အစီရင်ခံစာမှ နံပါတ်များဖော်ပြသည်။ LooksRare စျေးကွက်ကိုစတင်ပါ။ ဤတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည်။
အစီရင်ခံစာတွင် "blockchain ဂိမ်းများကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေကြသည်" နှင့် ၎င်းတို့သည် "စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးပြုမှု၏ 52% ကိုကိုယ်စားပြုသည်" ဟုလည်း အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ play-to-earn မော်ဒယ်၏ အောင်မြင်မှုများနှင့်အတူ ကျယ်ပြန့်သော တိုးတက်မှုများကို ချဲ့ထွင်ခြင်းသည်လည်း ကိစ္စရပ်အတွက် အားကောင်းစေပါသည်။ blockchain ဂိမ်းများသည် 2022 တစ်လျှောက်လုံး ဆက်လက်ကြီးထွားရန်.
ဤစျေးကွက်ကျဆင်းနေချိန်အတွင်း NFTs နှင့် blockchain ဂိမ်းများအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု ကြီးထွားလာမှုသည် တရုတ်ပရိသတ်များအတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် သက်ဆိုင်နိုင်ပြီး၊ နိုင်ငံသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစတင်မည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံမှ မကြာသေးမီက ကြေငြာချက်များနှင့် တိုက်ဆိုင်နေပါသည်။ crypto မဟုတ်သော NFT လုပ်ငန်း။ DappRadar ၏အစီရင်ခံစာအရ၊ "ယခုအချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် အကျယ်ပြန့်ဆုံးအသုံးပြုသူအခြေစိုက်သည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်…နိုဝင်ဘာလတွင်စာရင်းသွင်းထားသောနံပါတ်များမှ 166% တိုးလာပါသည်။"
ယခုအခါ အမေရိကန်နိုင်ငံသည် စုစုပေါင်းအသွားအလာ၏ ဒုတိယနေရာတွင် ရပ်တည်နေသော်လည်း NFT ဂေဟစနစ်တွင် အသုံးပြုသူအသစ် ၁၇၅,၀၀၀ သည် ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့် တိုးတက်လာသည်ကို တွေ့မြင်နေရဆဲဖြစ်သည်။ အနှစ်တစ်ထောင်နှင့် မျိုးဆက် Z သည် အသွားအလာ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် လူငယ်ပရိသတ်များကြား စိတ်ဝင်စားမှု ကြီးထွားလာမှုမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်လာသည်။
DappRadar အစီရင်ခံတင်ပြသည်မှာ "၎င်း၏အသွားအလာ၏ 30% သည်ဤအသက်အရွယ်အုပ်စုမှအသုံးပြုသူများထံမှလာသည် … [ထောင်စုနှစ်များနှင့်အတူ] ယမန်နှစ်မှကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည် 36% မှကြီးထွားလာသည်။"
admin 85183 posts0comments
တွန်ဂါနိုင်ငံတော်သည် Bitcoin ကိုတရားဝင်တင်ဒါအဖြစ်လက်ခံနိုင်သည်၊ ပါလီမန်အမတ်ဟောင်း – Bitcoin သတင်း
BTC၊ ETH၊ BNB၊ SOL၊ ADA၊ XRP၊ LUNA၊ DOT၊ AVAX၊ DOGE
Crypto သည် စျေးနှုန်းများထက် ပိုပါသည်။
Syndicate ၏ Ian Lee ဖြင့် DAOs ၏အခြေအနေ
Meme Coins၊ Avalanche သည်အင်္ဂါနေ့တွင်ပိုမိုမြင့်မားရွှေ့ –…
အောက်ခြေမှာ ရှိပါသလား။ ဒေတာများသည် 'capitulation' ဇုန်အတွင်းသို့…
Bitcoin ၏တရားဝင်တင်ဒါအဆင့်အတန်းကိုရပ်ဆိုင်းရန် El Salvador အား IMF မှတိုက်တွန်းထားသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုမူဝါဒ၏ အရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များအတွက် 'ကျယ်ပြန့်ပြီး နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်' ကို အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ် တောင်းဆို
Bitcoin ၏ အမှားပြင်ဆင်မှုသည် ယခုအချိန်အထိ ဆက်လက်ရှိနေသော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းသည် "Parabolic၊&#039; Peter Brandt က ပြောပါတယ်။
Bitcoin သည် $37K ထက် မြင့်တက်လာသည် ။ ခုခံမှု $40K-$43K
YouTube သည် Web3သို့ အမှုဆောင်တွဲကို ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်။
2 Gold-backed Crypto Asset Market Caps $1 Billion နီးပါး၊ XAUT သည် 23 လအတွင်း 19,000% ခုန်တက်သည် – Altcoins Bitcoin သတင်း
Biden အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း- ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်မညီသော Crypto စောင့်ကြည့်ရေး
YouTube အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က NFTs များကို ဖန်တီးသူပလပ်ဖောင်းတွင် ထည့်သွင်းနိုင်ကြောင်း အရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
Kanye West သည် NFTs များ၏အကူအညီဖြင့် Paparazzi ဓာတ်ပုံများထံမှ အခကြေးငွေရယူလိုပါသည်။
Bitcoin အရောင်း-အပိတ်သည် $100K စျေးနှုန်းအိပ်မက်များကို ရွှေ့ဆိုင်းသည်။
crypto လုပ်ငန်းသည် အဘယ်ကြောင့် အကျိုးတူအရင်းအနှီးလိုအပ်သနည်း- ဝါရင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့် အမေးအဖြေ
PureStake အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Derek Yoo သည် Moonbeam ကွန်ရက်နောက်ကွယ်ရှိနည်းပညာကိုရှင်းပြသည် – Bitcoin သတင်းကိုအင်တာဗျူး
BTC သည်တနင်္လာနေ့၏ရောင်းအားပြီးနောက်ပြန်တက်လာသည် – စျေးကွက်မှ Bitcoin သတင်းများကိုမွမ်းမံမှုများ
ဖန်တီးသူများကို အလုပ်တွင် 'Capitalize' လုပ်ခွင့်ပြုရန် NFT များကို ကမ်းလှမ်းရန် YouTube က စဉ်းစားနေသည်။
CFTC ဥက္ကဌဟောင်း Chris Giancarlo သည် Digital Asset ၏ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။
အင်တာနက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသည် ခွဲခြမ်းမရနိုင်သော အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
Republic Capital သည် ကွင်းဆက်တံတား Swing တွင် ဒေါ်လာ6သန်း အဝိုင်းကို ဦးဆောင်နေသည်။
Crypto Bear စျေးကွက်တွင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာ4ခု
CDBCs နဲ့ပတ်သက်ပြီး Fed က ဘယ်လိုထင်လဲ။
Amex စီအီးအိုသည် ခရက်ဒစ်ကတ်ကိုင်ဆောင်သူများကို crypto အတွက် အမှတ်များကို လဲလှယ်ခွင့်ပြုရန် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေရန် အရိပ်အမြွက် ပြောကြားခဲ့သည်။
Monero- ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြွေစေ့အကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။
စီးပွားရေးပညာရှင်များသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်အတက်အကျနှေးကွေးနေသဖြင့် လာမည့် FOMC အစည်းအဝေးကို အာရုံစိုက် – စီးပွားရေး Bitcoin သတင်း
သင်၏ crypto ကို လုံခြုံအောင်ပြုလုပ်နည်း – Cointelegraph မဂ္ဂဇင်း
စည်းမျဉ်းအသစ်များ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် ယူရိုနှင့် NFT များ မြင့်တက်လာသည်။
Crypto စိမ်းလန်းနိုင်ပါသလား။ Eco-Friendly Cryptocurrencies တွင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံနည်း
2022 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ 25 ရက်အတွက် Crypto သတင်းအကျဉ်းချုပ်
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ဒေတာမျှဝေခြင်းကွန်ရက် 'Project Galaxy' သည် ဒေါ်လာ 10 သန်း ရရှိသည်။
Japan's Multistakeholder Digital Yen ကုမ္ပဏီတည်ဆောက်မှုအတွင်း
ရုရှားဘဏ်မှအဆိုပြုထားသော Crypto တားမြစ်ချက်ကိုလွှတ်တော်၊ အစိုးရ – စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း Bitcoin သတင်း
© 2022 - Token Myanmar. All Rights Reserved.